Featured Blog Posts – April 2013 Archive (30)
नयाँ बर्ष सँगैका मेरा आशाहरु
हजारौ झुट बिच एउटा सत्य छ: तेही सत्यलाई आत्मसाथ गर्दै बिउँझिने गर्छु म एक "आम नेपाली" बनी । न त मेरो कुनै दल छ न कुनै संस्था, न मसँग कुनै राजनीतिक बल र समर्थक नै छन । न मेरो पुलिस सँग चिनजान छ, न गुण्डाहरुसँगको मित्रता । न मसँग उच्च पदको जागिर नै छ न शिरमाथि तिनको आशिर्बाद नै । न मसँग चिल्ला गाडी छन, न ठुला-ठुला होटेल जाने श्रोत नै । न मेरो बिदेशमा आफ्ना मान्छे छन, न देशमा ठुला-ठुला बङ्गला नै । न मसँग मर्दापर्दा कोही साथ दिने हातहरु छन, न मेरो वास्तविक हक…
Added by Surendra Kumar Bohara on April 22, 2013 at 12:30pm — No Comments
बर्डफ्लु संक्रमित सबै कुखुरा नष्ट : जोखिमयुक्त खोरको अनुगमन तीव्र
पछिल्लो पटक बर्डफ्लुको संक्रमण देखा परेपछि चितवनमा करिब ५५ हजार कुखुरा नष्ट गरिएको छ । भरतपुर–९ बसन्त चोकमा लक्ष्मी राणाको फर्ममा रहेका करिब ५२ हजार कुखुरा पछिल्लोपटक नष्ट गरिएको हो ।
वर्डफ्लुका कारण कुखुराहरु मरेको प्रमाणित भएपछि जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, राष्ट्रिय पंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाको प्राविधिक टोलीले शुक्रबार अबेर रातिदेखि कुखुरा मार्न थालेको हो । पहिलो दिन टोलीले राणाको फर्मका ११ हजार २९९ कुखुरा नष्ट गरेको थियो । त्यस्तै सोही दिन मंगलपुर–७…
Added by अल्टर कान्छो’ on April 22, 2013 at 10:00am — No Comments
बुढेसकालमा पौढकक्षा मार्फत अक्षर सिक्दै आमाहरु
बाह्रबिस-५ जुवापानी बस्ने ६४ बर्षिय तिर्थदेवि सिंह उमेर ढल्कँदै लाग्दा अक्षर चिन्न थालेकी छन् । दिनभरी घरको काम गरेर बेलुकी उहाँ अक्षर चिन्न थालेकी हुन् । समयमै पढन नपाए पनि यो उमेरमा अक्षर सिक्न लागेको उहाँले बताउनुभयो । आफुहरुले बृद्धभत्ता बुझ्ने समयमा पनि लेख्न नजानेर औँठा छाप लगाउनुपर्ने भएकाले पनि आफुले नाम लेख्नका लागि अक्षर चिन्न थालेको उहाँको भनाई छ । उहाँ जस्तै उमेर ढल्कँदै गर्दा धेरै महिला अक्षर चिन्न थालेकी छन् । उमेरले ६० बर्ष पार गरेकी नामसरा देवि सिंह पनि गाउँमा संचालन भएको…
Added by Chandra Budha on April 21, 2013 at 12:30pm — No Comments
पछिल्ला दिनहरुमा मैले साझा बस साझा बस भनेको खुब सुन्ने मौका पाएँ । साझा बसले नै नेपालको सम्पुर्ण यातायात ब्यवस्था धानेझैँ गरी होहल्ला मच्चियो पछिल्ला दिनहरुमामा यो राजधानी शहरका सबै मिडियाहरुमा । हुन त काठकाण्डौमा बस्नेहरुलाइ नेपालमा काठमाण्डौ बाहेक अन्त पनि ठाउँ छन भन्ने त्यत्ति हेक्का हुँदोरहेनछ र हो कि? तै, जे भएपनि यो साझाबस भन्ने चिज कस्तो रहेछ, कैले चढ्न पाइएला भन्ने कौतुहल मनमा रहिरह्यो भलै दशैँका बेलामा घर जाँदा वाक्दै जानुपर्दा र त्यही हालतमा काठमाण्डु…
Added by Prakash Lamichhane on April 16, 2013 at 5:28pm — No Comments
भट्टराई सरकारद्वारा ५ महिनाको भ्रमणमा ५ करोड स्वाहा
चालु आर्थिक वर्षको पुष महिनासम्ममा मन्त्रिपरिषदले भ्रमणका नाममा ५ करोड १२ लाख १ हजार १ सय ९७ रुपैंयाँ खर्च गरेको छ । गत पुषको २३ गतेसम्म मन्त्रिपरिषदका सदस्य तथा मन्त्रिपरिषदसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुले गरेको खर्चलाई मात्रै यसमा समावेश गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेभसाइट डब्लु डब्लु डब्लु डट ओपीएमसीएम डट जीओभी डट एनपीमा राखिएको मन्त्रिपरिषदको भ्रमण खर्च विवरण अनुसार अहिलेसम्मको भ्रमण खर्च गत आर्थिक वर्षको तुलनामा एक करोड ६०…
Added by Binod Sharma on April 15, 2013 at 4:30pm — No Comments
सुदुरपश्चिममा सिस्नोपानी छर्केर बिशु तथा नयाँबर्ष मनाईयो
सदुरपश्चिममा नयाँबर्ष तथा बिशुपर्व यसपाली पनि सिस्नोपानी छर्केर मनाईयो । सुदुरपश्चिमका अछाम, बाजुरा, डोटी, बझाङ् लगायतका पहाडी जिल्लामा सिस्नोपानी छर्केर बिशु पर्व मनाउने चलन छ । बर्षौदेखि मनाउदै आइएको यो पर्वलाई नववर्षको पहिलो दिनमा मनाउने गरिन्छ । यस पर्वलाई सुदुरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा मूख्य पर्वका रुपमा मनाउने गर्छन् ।
नोकरीका लागि बिदेश र जिल्ला वाहिर गएका पनि यो समयमा घरमा आउने गर्छन् । घर आगनमा जम्मा भई एक अर्कामा सिस्नोपानी छर्केर, रमाइलो गरेर धुमधामका साथ यो पर्व मनाउने…
Added by Purna Bahadur Khadka on April 14, 2013 at 7:00am — No Comments
धराप बन्दैछ पोखरा सभागृह
उपमहानगरले धान्न नसकेपछि निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी
चैतको दोस्रो साता नेपाल पत्रकार महासंघको साधारणसभामा भाग लिन आएका मुलुकका विभिन्न स्थानका पत्रकारले पोखरा सभागृहको अवस्था देखेर उदेक माने । ‘सम्पन्न’ सहर पोखरामा सबै कुरा ब्यवस्थित होला भन्ठानेका उनीहरुले सभागृहका जीर्ण कुर्सी, अस्तब्यस्त सौचालय, बिग्रेको घडी अनि फुंग रंग उडेका भित्ता देखेपछि भनेका थिए, पोखरामा पनि यस्तो सभागृह । हो, दिनहुँ जस्तो कार्यक्रम भइरहने पोखरा सभागृह उचित संरक्षणको अभावमा अहिले जीर्ण बन्दै…
Added by Bharat Koirala on April 13, 2013 at 5:00pm — No Comments
प्रचण्डले भने: कति कुरा फेर्नुहुन्छ हँ !
एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छिटो बोली फेर्ने नेतामा चिनिन्छन् । एक ठाउँका भाषणमा बोलेको कुरा अर्को भाषण आफैले काटेका कयौं उदाहरण छन् । गतसाता पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नै कार्यक्रकर्ता र सुरक्षार्मीलाई भने, 'तपाईंहरु कति छिनछिनमा कुरा बदल्नुहुन्छ हँ !'
आफै कुरा बदल्ने प्रचण्डले यसो भनिरहँदा पोखरेली पत्रकार पनि निकै खुलेर हाँसे । बागलुङका कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा भाग लिएर बुधबार राति नै पोखरा आएका प्रचण्डसंग…
Added by Bharat Koirala on April 12, 2013 at 5:00pm — No Comments
सामाजिक संजाल vs असामाजिक ब्यवहार
सन्दर्भ : 'विश्व ब्लगर्स दिवस-मे २'
केही दिनअघि फेसवुकको भित्तामा सूचना तथा संचार मन्त्रालयको नामबाट लेखिएको एउटा सरकारी बिज्ञप्ति पोष्ट भयो र विस्तारै विस्तारै त्यसले विभिन्न सामाजिक संजालहरु नै भर्यो । सूचना मन्त्रालयको लेटरहेडमा छापसहित सूचना तथा संचारमन्त्री माधव पौडेलले हस्ताक्षर गरेको एउटा सूचना थियो त्यसमा । सूचनाको आशय फेसवुकको माध्यमवाट राजनितिक नेताहरुलाई असभ्य भाषाशैली…
Added by pawan neupane on April 12, 2013 at 4:30pm — 1 Comment
वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल भन्छन् "फेरियो पत्रकारिता उस्तै छन् पत्रकार "
मलाई प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यबाट बोलावट आएको रहेछ । म बेतोडले उनलाई भेट्न दौडिएँ । पुगेको मात्र के थिएँ, उनी त हप्काउन पो थाले, ‘यस्तो नि हुन्छ खबर ?’ उनका हातमा ‘हालखबर दैनिक’ थियो । त्यहीँ लेखिएको एउटा समाचारप्रति उनको आपत्ति रहेछ, जुन मैले नै लेखेको थिएँ । २०१३ सालका ती दिन म हालखबर दैनिकमा रिपोर्टिङ गर्थें । अघिल्लो दिन शनिबार । म साइकल चढेर समाचारको खोजीमा हुइँकिइरहेको थिएँ । अफिसले नै दिएको साइकल । डुल्दाडुल्दै डिल्लीबजारतिर पुगेँ । चारखाल अड्डाको चोकमा खसी काटेर मासु भाग…
Added by pratima silwal on April 12, 2013 at 11:30am — No Comments
विप्लवहरुको सम्पत्तिमा कसले झण्डा गाड्ने ?
सातामा राजनीतिक रुपमा गतिला समाचारले सहर तताउन सकेन । निर्वाचनलाई केन्द्रविन्दु बनाइएका फुस्रा खबरहरु सार्वजनिक भए र केहीहदसम्म एकीकृत नेकपा माओवादीले सरकारसँग असन्तुष्टि जनाएको खबर आयो । तर, यी खबरहरुभन्दापनि ध्यानकेन्द्रित गर्ने खबरचाँही मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको बर्दियामा रहेको जग्गामा नेकपा–माओवादीले आफ्नो झण्डा गाडेको नै थियो । जंगलपनि नजाने तर आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेको नेकपा–माओवादीले किन कव्जाको रणनीतिलाई अपनायो ? शान्ति प्रकृयामार्फत सहरकेन्द्रित राजनीतिमा फर्किएर…
Added by Binod Dhakal (D.Binod) on April 11, 2013 at 1:00pm —3Comments
ग्याब्रियल गार्सिया मार्खेजले '२० औं शताब्दीका महानतम् कवि' ठहर्याएका चिलीका विश्वविख्यात कवि पाब्लो नेरुदाको शवको केही दिन अघिमात्रै अवशेष उत्खनन गरियो, मृत्युको चालिस वर्षपछि । सन् १९७३ मा तानाशाह अगस्टो पिनोसेले सैनिक ‘कू’ गरी सत्ता हत्याउनु र साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार जित्ने वामपन्थी कवि नेरूदा अनि समाजवादी राष्ट्रपति साल्भाडोर एलेन्डेको मृत्यु संगसंगै हुनु संयोग मात्र होइन भन्दै मृत्यु (वा हत्या !) बारे थप अनुसन्धान गर्न शव उत्खनन गरिएको थियो। मरेको २ महिनासम्म पनि शवयात्रा गर्न…
Added by Subhas Lamichhane on April 10, 2013 at 11:30am —2Comments
कामकाजी परिवारमा सहयोगी श्रीमान
आज "मर्निङग वाक" नजाने? बाट सुरु हुने दैनिकी छ उनीहरुको । श्रीमान र श्रीमती दुबै सामान्य जागिरे छन त्यसैले पनि दुवैको दैनिकी चटारो र हतारिलो छ । घर बाहिर श्रीमती बढी ब्यस्त हुने भएकोले घरभित्रको जिम्मेवारी श्रीमानले लिएको छ । त्यसैले पनि आफुलाई पायक परेको ठाउमा नै कोठा खोजेर बसेका छन । श्रीमती बिहानैदेखि तालिममा सामेल हुन्छिन भने श्रीमानको चाँही साँढे नौ बजे कार्यालय पुग्नुपर्छ । आजसम्म जति चटारो भएपनी कार्यालय जाँदा समय मै पुग्छन दुबैजना ।…
Added by Jiwan Sharma on April 10, 2013 at 10:30am —4Comments
गतसाता एउटा पत्रिकामा सुर्खेत लेखिएको देखेपछि समाचारमा ध्यान गइहाल्यो किनकी गृहजिल्लाको समाचारले कस्को पो ध्यान नतान्ला र ! समाचार के रहेछ भनेर पल्टाएर हेरेँ । ओहो ! सुखद समाचार पो रहेछ : '५० गाविस रहेको सुर्खेत जिल्लामा खुल्ला दिसा मुक्त गाविसको संख्या १९ पुगेको छ । सुर्खेत जिल्लालाई सन् २०१५ सम्म खुल्ला दिसा मुक्त जिल्ला घोषणा गरिसक्ने लक्ष्यस्वरुप खुल्ला दिसा मुक्त गराउने अभियान चलिरहेको छ । सन् २०१७ सम्म मुलुकलाई नै खुल्ला दिसा मुक्त बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य बनाइएको छ…
Added by Prakash Lamichhane on April 9, 2013 at 11:00am —6Comments
Added by Tika Raj Panta on April 9, 2013 at 10:30am — 1 Comment